လေ့လာမှု Besiktas Metro တူးဖော်မှုဆိုက်ကိုမှာတွေ့ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်İmamoğlu - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်လေ့လာမှု Besiktas Metro တူးဖော်မှုဆိုက်ကိုမှာတွေ့ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်İmamoğlu
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
မြေအောက်တူးဖော် besiktasta သမ္မတ imamoglu လယ်ပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်
ပှဲမတိုင်မီပေးထား IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, "ငါသည်အစ္စတန်ဘူလ်၏လမ်းများအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်" သူ၏စကားလုံးထားရှိမည်။ ပထမဦးစွာကျောက်ခေတ် - လိုင်းဆောက်လုပ်ရေး site ကိုကြည့်ရှုခြင်းİmamoğlu၏ Besiktas Mahmutbey မက်ထရိုဘူတာ, "ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးသောအခါ, ဘူတာရုံကိုလည်းပြတိုက်သို့လှည့်ခံရလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ Üsküdarကနေလှေဖြင့် Besiktas နောက်ဆုံးİmamoğlu, ဆောက်လုပ်ရေး၏စတုရန်းအစီအစဉျတှငျလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုဖန်ဆင်းပြီးယခုအချိန်တွင်လွန်ခဲ့၏လုပျငနျးပြီးစီးမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကိုပေး၏။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, မြေအောက်ရထား၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး၏ဒုတိယနေ့၌အဘို့ဆောင်သောပွဲနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေး site ကိုမှမြှုပ်နှံသည့်စတုရန်းအစီအစဉ်န်းကျင်သွားလာရကြ၏။ ဆိုက်မှာတွေ့ရတဲ့ Mahmutbey မီထရိုဘူတာရုံ Besiktas စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ - နောက်တစ်နေ့သူ၏ဒုတိယသားİmamoğlu, ပထမကျောက်ခေတ်မှ Semih လယ်ကွင်း။ အစ္စတန်ဘူလ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာပြတိုက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Rahmi Asal, မြေအောက်ရထား၏တူးဖော်နေစဉ်အတွင်းတွေ့ရတဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအပိုငျးအနှင့်အတူတက် လာ. နှင့်İmamoğluလက်ခံရရှိအောက်ရှိဒေသနှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပေး၏။ Asal, မြေအောက်ရထားတူးဖော်နေစဉ်အတွင်းအဆိုပါကြေးခေတ်အပိုငျးအထဲကနေချိန်းတွေ့အော်တိုမန်နှင့်ဘိုင်ဇင်တိုင်းကာလနှင့်အတူဆက်ရှိနေတဲ့သင်္ချိုင်းအဖြစ်İmamoğluနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်္ချိုင်းကနေဖယ်ရှား Asal, İmamoğluဖို့, တထောင်5500 အကြောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ထင်နှင့်ကိရိယာများအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်အချို့သောဥပမာပြခဲ့တယ်။ Asal, ပြတိုက်မှအရေးပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလမ်းများခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လိုအပျကွောငျးသမိုင်းဆိုင်ရာအပိုငျးအမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်, ထိုမက်ထရိုဘူတာအဝင်ဝ၏ကျန်ရှိသောအမှုတော်တို့ကိုအများပြည်သူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
"Besiktas STATION ကို, LINE ရက်စွဲအဆုံးသတ်မထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်"
İmamoğluလည်းဂျာနယ်လစ် '' မေးခွန်းများကိုဆိုက် "ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာစခန်းချနေရာများဟာ" n ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ İmamoğlu, "အဘယျသို့ဇာတ်စင်မှာ Metro တူးဖော်? သငျသညျဇန်နဝါရီလ 2020 ၏အဆုံး၏ရက်စွဲတူးဖော်ငါတို့အဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုဖြစ်ကြ၏ရှိရာ "ဟုအဆိုပါမေးခွန်းအား" Besiktas အတွက်မက်ထရိုစီမံကိန်းများတွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတည်းခိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်ဟာကြီးမားတဲ့သမိုင်းအတိတ်သောကွောငျ့, လေ့လာမှုတစ်ခုကဒီမှာအလင်းကိုသွန်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ယူတိုင်းခြေလှမ်းဂရုတစိုက်ဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ့်နိမိတ်လက္ခဏာ၌စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည်ဒါဘာလဲ။ ဤတွင်ကျွန်မတူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲတော်မူသောငါတို့၏ပါမောက္ခများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကမှအောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။ ဟုတ်ပါတယ်, အစ္စတန်ဘူလ်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဤတန်ဖိုးများကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်, တဦးကိုလက်ပေါ်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီကရရှိခဲ့သတင်းအချက်အလက်များအဆိုအရကြောင့်ဘူတာရုံတစ်ဝိုက်တွင်တူးဖော်ရန်နှောင့်နှေးဆိုပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျောက်ခေတ် - Mahmutbey လိုင်းတစ်ခု inhibitory ပြည်နယ်ထုတ်ဖေါ်မထားဘူး။ သငျသညျယခုစေ့စပ်ဒီသာလျှင်ရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ဖွင့်ပွဲအနည်းငယ်နှောင့်နှေး။ လူတွေကလည်းကဒီမှာဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံဝင်သောအခါ, သူတို့ကမြေအောက်ရထားသို့ဆင်းသက်တော်မူသကဲ့သို့သင်တို့အပျက်အယွင်းတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ layout ကိုပေးလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မျိုးလုံးသည်ဘူတာရုံအဖြစ်ကောင်းစွာပြတိုက်သို့လှည့်ခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
İmamoğluမကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကျနော်တို့လမ်း Balmumcu ၏ပြိုကျမျက်မြင်ကြပါပြီ "ဟုပြောသည်။ သူဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးခဲ့ကြတယ်ခဲ့မြေအောက်တူးဖော် "၏ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါသလား။ ဤမေးခွန်းကိုမှİmamoğluရဲ့တုံ့ပြန်မှု, "အဲဒီမေးခွန်းကိုပင်ထိုကဲ့သို့သောနှောင့်နှေးမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ကိုရှာဖွေ, စသူတို့အားသောအရပ်တို့ကိုဦးစားပေးဖို့ကျရောက်နေတဲ့အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့အစီအမံယူလျှင်။ ငါစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအတွက်အလေးအနက်အစီရင်ခံစာ, ငါ့မိတ်ဆွေအများဆုံးချင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီမှာအလုပ်လုပ်သောသူသည်လူတို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်ဤကိစ္စအပေါ်တစ်ဦးကြာရှည်အပြင်ဘက်အတူတကွလာမှအများဆုံးပြင်းထန်သောလမ်းတစ်အမြန်အစီရင်ခံစာဖန်တီးရန်တူညီစားပွဲ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအများပြည်သူအကြောင်းကြားရန်အစီအမံများအတွက်လမ်းပြမြေပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်မည် "ဖြစ်ခဲ့သည်ယူပါလိမ့်မယ်။ İmamoğlu "အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး,3အတွက်အများဆုံးစိန်ခေါ်မှုလမ်းကြောင်း။ လေဆိပ်။ သငျသညျသူတစ်ဦးမက်ထရိုဧရိယာများအတွက်အလုပ်လုပ်ထင်ပါသလား? လူတိုင်းသည်ဤတစ်အတွေးမဟုတ်ပါဘူး "ဟုအဆိုပါပုံစံ၏မေးခွန်းကိုအပေါ်" ဒီလိုသတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုပြီးသား Mecidiyekoy -3။ လေဆိပ်လိုင်းတစ်လိုင်းယခုအချိန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကတင်ဒါခဲ့သည်။ ထိုမင်းသည်လမ်းလျှောက်။ မြို့ပြမြူနီစီပယ်၏ဤတင်ဒါကျင့်ဝတ်တဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားလိုင်းများ, မြေအောက်ရထား - Metrobus, ဘူတာရုံဖွဲ့စည်းပုံမှာအများအပြားရှုထောင့်များတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လည်းပါဝင်ပါသည်။ ဒီလက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်၌တည်၏။ လောလောဆယ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်ချီတက်သို့မဟုတ်ပင်ဤလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဲဒီမှာလတ်တလောခရီးစဉ်သတင်းအချက်အလက်ရ။ သူကကျနော်တို့ကိုလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များ၏အလင်း၌သငျသညျအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကို "အဖြေခဲ့လျှင်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှစ်ဦးစလုံးလည်းကြားသိပါလိမ့်မည်။
"Esen ထံမှBAĞCILAR, WE လေ့လာသူများအောက်၌ရှိသမျှသောစတုရန်းသိမျးယူခဲ့ '
İmamoğlu, "ဒီနေ့သင်Kadıköy- Uskudar လမ်းများသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်မှာအများဆုံးစပ်စုအစ္စတန်ဘူလ်အရပျ၌ Taksim ရင်ပြင်မှာ။ သငျသညျအဲဒီမှာပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်ပါသလဲရုံKadıköy, Üsküdarသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့် Taksim မဟော "ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြစ်ပါသည်" ။ Bağcılar Esenler အများအပြားစတုရန်းများ၏လေ့လာရေးအောက်မှာလက်ခံရရှိပါပြီ။ ငါဝိသေသလက္ခဏာများ၏ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဤမြို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ခုခု၏အဝတ်အချည်းစည်းစကားရပ်ဖြစ်၏။ Taksim သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကပိုကလူသူတို့ကကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွေ့ရှိရသည့်နေရာတွင်တစ်ဦးဧရိယာအသက်ရှင်ချင်တယ်။ နှစ်ထပ်ကိန်း၏သမိုင်းဝင်မစ်ရှင်လည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါတို့သည်ဤကိစ်စတှငျဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးစားပွဲ၌ထိုင်ချင်ကြဘူး။ Taksim နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုတစ်ဦးလမ်းပြမြေပုံခန့်ထားပြီ။ အဲဒီမှာတစ်ဦးအမြန်ကျန်းမာဝေမျှစီမံကိန်းကိုဖွဲ့စည်းရေးလေ့လာမှုများရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအများပြည်သူအတွက်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့သမ္မာသတိတင်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်။ မြှုတ်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းသင်နှင့်အတူဝေမျှပါလိမ့်မယ်။ အနီးအနားငါတို့သည်လည်းဝေမျှ "ဝမ်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ŞEMSİ PASHA ဗလီနှင့်ဗိသုကာပညာရှင် SINAN စတုရန်း FOR ကြားသည်
İmamoğluနှင့်သူ၏ပူးတွဲကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို, Besiktas ကနေလှေစီးပြီးÜsküdarလွန်။ İmamoğlu, လှေရဲ့ကပ္ပတိန်ယူခြင်း, အခြားအလှေဗိုလ်မင်း, အလုပျသမားမြား၏အဘို့ဆောင်သောပွဲကျင်းပ radioed ။ အဆောက်အဦး၏စာမေးပွဲအောင်ဖို့လှေထဲမှာİmamoğluန်းကျင်Üsküdarစတုရန်းအစီအစဉ်တစ်ကြိမ်နိုင်ငံသားများရာပေါင်းများစွာကဝိုင်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများနှင့်အတူİmamoğluမနက်စောစောနှုတ်ခွန်းဆက်စကား, နိုင်ငံသားများနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေအများကြီးကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခြေလျင် 200 45 မိနစ်İmamoğluဖို့လမ်းယူနိုငျသညျ, site ကိုတာဝန်ရှိသူများကနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေး၏။ အရာရှိများ, ဆောက်လုပ်ရေးİmamoğluစဉ်အတွင်းစွပ်စွဲချက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမေးစည်းမျဉ်း adjoining Shamsi Pasha ဗလီ၏အခြေခံပေါ်မှာဆောက်လုပ်ရေး, အဖြေခဲ့တယ် "ကျနော်တို့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်ရှိမရှိ၏အခြေခံပေါ်မှာရာ၌တိုင်းတာအတွက်ဗလီ, ငါတို့ပဲတန်တိုင်းရိုး၌ဖွဲ့စည်းခဲ့တစိတ်တပိုင်းအက်ကွဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့" ။ İmamoğlu, ဆောက်လုပ်ရေး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, ပတျဝနျးကငျြရှိလူများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သမိုင်းမထိခိုက်စေဘဲ, သူအဖြစ်မကြာမီပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်မပြတ်မတောက်လူကူးစီးဆင်းမှုအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုသည်။ Üsküdarအတွက်İmamoğluအားဖြင့်မှတ်ချက်ပြုနောက်ထပ်အရာ IMM "Mimar Sinan Square ကို" ကတည်ဆောက်ခဲ့ related အရောင်းဒေသကနေတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ İmamoğluသူတစ်ဦးဘုံစားပွဲပတ်လည်အလုပ်လုပ်၏စိန်ခေါ်မှုကြောင့်ထိခိုက်သိမ်းသွားလေ၏နှင့်တာဝန်ရှိသူများကတွေ့ဆုံရန်ချင်တယ်။ ဒါဟာဘာသာရပ်အပေါ်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအလုပ်စတင်နိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေး site ကိုကြည့်ရှုခြင်းİmamoğluအစည်းအဝေးပြီးနောက်နိုင်ငံသားများ Besiktas အတွက်ပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားအောက်မှာတစ်လှေစီးသှားကွ၏။ ပါတီŞişhane CHP အစ္စတန်ဘူလ်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌအတွက်İmamoğluနှင့် ပို. ပို. Canan Kaftancıoğlubayramlaşanခဲ့သည်။
Topbaş Besiktas မီထရိုဘူတာများတွင်ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ် 29 / 08 / 2017 အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူရှေးဟောင်းသုတေသန site ကိုကြည့်ရှုခြင်းမြို့တော်ဝန် Kadir Topbaş Besiktas မီထရိုဘူတာစာနယ်ဇင်း "ဟုအဆိုပါကျောက်စာ-Mahmutbey မြေအောက်တူးဖော်၏ 82,5 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးခဲ့ကြသည်။ Mecidiyeköy-Mahmutbey အကြား 2018 နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ဒုတိယတစ်ဝက်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါ 2019 ခုနှစ်တွင် Mecidiyekoy ကျောက်ခေတ်-ဇွန်လထံမှကြောင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်၏အထိနိုင်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas Besiktas ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးတဲ့သူစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူကျောက်စာ-Mahmutbey မီထရိုဘူတာများတွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာပြတိုက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Zeynep မြို့တော်ဝန် Kadir Topbaşထံမှကောက်ယူKızıltanလယ်ပြင်လေ့လာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့, သတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သူသူတို့ကရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ယခုနှစ် 2016 ရဲ့အဆုံးမှာစတင်ဖြည့်စွက်ရန်စီစဉ်ဟုပြောသည်။ 24,5 ကီလိုမီတာ ...
လေ့လာမှု Galataport မှာတွေ့ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်İmamoğlu, 07 / 08 / 2019 "ဒီ Seagull" တွင် IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem Zeytinburnu အတွက်İmamoğlu "Büyükyal" နှင့်ကျောက်ခေတ် Galata ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းတွင်တွေ့ရှိခဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပြီး။ , İmamoğluမီးမောင်းထိုးပြအားလုံးစီမံကိန်းများသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မြို့ကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ် "ဒီမှာ 20 စီမံကိန်းတွင်နောက်ဆုံးတဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပါ။ သူတို့ကစီးမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါငါတို့သည်ငါတို့၏အလုပ်လုပ်အဖွဲ့အကြားကဤစီမံကိန်းများအတွက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနီးကပ်ညှိနှိုင်းရချင်ပါတယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, Karakoy အတွက် Galata ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းကိုသွားရောက်လည်ပတ်, အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ IMM İmamoğluအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုလည်းအထောက်အကူ Yavuz Erkut ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါİmamoğluထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုအစ္စတန်ဘူလ်အပန်းဖြေပျေါလှငျစီမံကိန်းများ, "စာ ပို. ပို. ကျနော်တို့အတူတူသင်ယူဖို့ချင်တယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချက်ချင်းဝနျးကငျြကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပြုလေ၏အဘယ်အရာကိုများနှင့် ...
AK ပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတဓား, Palandökenထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) မှာတွေ့သည် 07 / 10 / 2013 ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာထဲမှာတွေ့ AK ပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတဓား, Palandökenထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: AK ပါတီ Erzurum ပြည်နယ်ကိုသမ္မတ Murat Kilic, Palandöken Logistic ကျေးရွာသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ ဓားတူရကီ, တူရကီ၌မသာ, တစ်ပူးတွဲအာကာသအတွင်းသယ်ဆောင်ကြောင်းညွှန်ပြထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာ 12 တထောင်စတုရန်းမီတာ, Halkalı နှင့် Samsun အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံဟုသူကဆိုသည်။4။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Erzurum ဓား, "သူတို့ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသိသိသာသာအလှူငွေများ၏ရွာများတွင်တည်ရှိသောထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၏အထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရွာထူထောင်ရန်ရှင်းပြ။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရွာလူတိုင်းလိုလားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Erzurum အရှင်အလွန်ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်အဆိုပါထုတ်လုပ်သူများ Erzurum တည်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သည်သုံးစွဲဖို့ဒီမှာစက်မှုလုပ်ငန်းသိုလှောင်မှုစင်တာလုပ် ...
သမိုင်း Discovery Besiktas Metro တူးဖော်တွေ့ရှိ 17 / 08 / 2017 Besiktas မှာမက်ထရိုဘူတာတစ်ခုသမိုင်းမဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီရန် Neolithic ကာလ၏အပျက်အယွင်း၌တွေ့ပါပြီ။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာပြတိုက်နှင့်တွေ့တထောင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဒီနေ့ရဲ့6သှားဖို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်အားဖြင့်တူးဖော်မှုကြောင့်လည်း Bosporus များအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ဟုဆိုသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ကျောက်ခေတ်အချိန် Besiktas အောင်-၏Mecidiyeköy-Mahmutbey မက်ထရိုလိုင်းဘူတာရုံ Besiktas အဆိုပါ xnumx'unc မှရက်စွဲပါအပျက်အယွင်းများနှင့် xnumx'nc ရာစုတူးဖော်၌တွေ့ပါပြီ။ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကျနော်တို့ကျန်ကြွင်းဖယ်ရှားရေး၏သိပ္ပံနည်းကျ drawings နဲ့မှတ်တမ်းများကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, အရပျ၌တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံ၏အခြေခံကာကွယ်ပေးရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြတိုက်ညွှန်ကြားမှုရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ဆက်လက်ခဲ့ကြသည်ထိန်းချုပ်သည်။ BRAND NEW Discovery ဒီအမှန်တကယ်တူးနှင့်အထူးသဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဆောက်လုပ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် Mecidiyekoy-Besiktas Kabatas Metro-အလုပ်သမားသေဆုံးမှု 22 / 05 / 2015 Metro ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားသည်သေခြင်း၌ Mecidiyekoy-Besiktas-ကျောက်ခေတ်: မနေ့ကအခြေခံအုတ်မြစ် Mecidiyekoy အတွေ့အကြုံရှိလုပ်သားများအလုပ်လုပ်နေစဉ်မတော်တဆမှုသေဆုံးခဲ့မီထရိုလိုင်းမြေအောက်ရထားဘူတာရုံ၏ Mecidiyekoy-Besiktas-ကျောက်စာတင်ကြ၏။ ဖြစ်ရပ်များ၏ဆိုးရွားသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အမိန့် 03.00 အတွက်မြေအောက်ရထားတည်ဆောက်နာရီ Mecidiyekoy Mecidiyekoy-Besiktas-ကျောက်ခေတ်ဘူတာဆောက်လုပ်ရေး site ကိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas နေဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြို့တော်ဝန်, မြေအောက်ရထား၏စွန့်ပစ်ဆောက်လုပ်ရေး၏နောက်ဆုံးအခြေခံလေ့လာမှုများစဉ်အတွင်း, ကင်မရာအလုပ် 32 နှစ်အရွယ် Adil Kolukısaoğl၏ဘေးထွက်ပေါ်မှာထိုင်, စွပ်စွဲ, လက်ကျန်ငွေဆုံးရှုံး, ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ကျပြောဆိုသည်။ Kolukısaoğlအဆိုပါသိမ်းပိုက်စက်အောက်စက်အော်ပရေတာများကသတိမပြုမိ ...
ဆန်းစစ်ခြင်းသမ္မတKaraosmanoğlu Durmazlar စက်ရုံမှာတွေ့ရှိ 19 / 12 / 2016 စက်ရုံ၏လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Karaosmanoğlu Durmazlar: တူရကီကမ္ဘာ့ဖလားအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲသမဂ္ဂ (TDBB) နှင့် Kocaeli မြို့တော်ဝန် Ibrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli အဆိုပါရထားလမ်းလွှဲပြောင်း 12 စုစုပေါင်းပေါ်လာတာဟာအရင်လုပ်ယာဉ်ဟာစက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစက်ရုံအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုရပ်တန့်ကြပါဘူးစတင်ပါလိမ့်မည်သည့်လမ်းရထားစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုရမည်။ အဆိုပါ 7,2 ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်းများတွင်အမေရိကန် with'll NATIONAL အသီးအနှံများ၏ခေတ်ပြိုင်လူ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့် 14.4 အပေါ်ကို run ပါလိမ့်မယ်လိုင်းများနှင့်လမ်းရထားလိုင်းကိုကီလိုမီတာဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးနေစဉ်, 11 ဘူတာရုံအခြေခံအဆောက်အဦများထားရှိရေးအကြီးအကျယ်ပြီးစီးခဲ့အိုးအိမ်မဲ့အလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်အာဗြဟံသည်Karaosmanoğluအကြောင်းကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမော်တော်ယာဉ်, Durmazlar စက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစက်ရုံများ၏အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်သူသည်ခေတ်ပြိုင်တစ်ဦးကကြေညာချက်တွင်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
လေ့လာန်ထမ်းများ၏ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard မှာတွေ့ရှိသံမဏိဌာနမှူး, 12 / 04 / 2018 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မလြော့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆက်လက်။ အရည် Boulevard အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်မြို့တော်ရဲ့အရေးအပါဆုံးနညျးလမျးတစျခုဖွစျလိမျ့မညျအရာမြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi ။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, အ Boulevard mite အတူလမ်းဆုံမှလုပ်ခံရဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရာ Pasha တံတားကြလိမ့်မည်ကို Aydin Aydogan ဒေသတွင်း၌ Farabi လမ်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ဥက္ကဋ္ဌသံမဏိ, တံတား Pasha Aydin Aydogan စနေနေ့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖော်ပြ, ဧပြီ 21 စွန့်ပစ်။ ဝန်ထမ်း၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲယခင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard Street're Tavlu သူဟောင်းအိမ်၏ဖြိုဖျက်အပေါ်လေ့လာမှုများနောက်တော်သို့လိုက်ရှိရာသံမဏိ၏ဥက္ကဋ္ဌ။ အတွက် Boulevard အထူးကြပ်မတ်လေ့လာမှုများ ...
လေ့လာန်ထမ်းများ၏ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard မှာတွေ့ရှိသံမဏိဌာနမှူး, 11 / 09 / 2018 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard မှာတွေ့ရတဲ့အသွားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သော Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, Kayseri ။ ဥက္ကဋ္ဌသံမဏိ, Hulusi သူတို့အရည် Boulevard အတွက်နည်းစနစ်အသစ်တွေနဲ့လျင်မြန်စွာကုန်ထုတ်လုပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်ဟုပြောသည်။ မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik, ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard အဆိုပါ Boulevard ၏ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်မှာအဖြစ်မကြာမီဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ Hulusi သူဟာအာကာ 14 Malatya နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံမှ Mustafa Kemal Boulevard Boulevard လမ်းသံမဏိသည်အထိဆက်လက်ဖော်ပြကီလိုမီတာပါလိမ့်မည် "ဟုအဆိုပါစနစ်အားလိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဖြတ်သန်း Boulevard ကဲ့ရဲ့ခြင်း။ ဤတွင်ကျနော်တို့အလွန်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မြေ၌အရေးကြီးဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အ ...
ဥက္ကဋ္ဌသံမဏိ, Storey Terminal နှင့်လမ်းဆုံ၏လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိ 20 / 12 / 2018 Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နေဆဲမြို့အရေးကြီးသောဆုံရောက်စေဖို့လုပ်ဆောင်နေစဉ်ဆက်မပြတ်မလြော့နေဆဲဖြစ်သည်။ သံမဏိ၏သမ္မတ, Terminal နှင့်လမ်းဆုံများတွင်ရာ၌လမ်းဆုံထပ်တိုက်အဆောက်အဦး၏စာမေးပွဲ၌တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ရိုးဖို့မြူနီစီပယ် Kavuncu Terminal နှင့်လမ်းဆုံ Boulevard အားဖြင့် Osman အရှည်နှင့်အကျယ်အတွက်စုစုပေါင်း 550 20 မီတာမီတာပုံပြင်တစ်ပုဒ်လမ်းလုပ်နေတာနှင့်အတူပါဝင်သည်။ ဆောင်းတွင်းတဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mustafa Celik ကြားမှလုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်သောလမ်းဆုံထပ်တိုက်အဆောက်အဦးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်, သူတို့စီမံကိန်းအစောပိုင်းကာလဖြည့်စွက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကဆိုသည်။ သူတို့ကဥက္ကဋ္ဌ Mustafa Celik ပြောနေကြပါတယ်ဆော့ဝဲအစုအဝေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမိုးပွင့်အလုပ်မလုပ်သူကအကြံအဖန်တွေချည်းထုပ်၏အလုပ်၌ထားရန်စတင်ကပြောကြားသည်။ အဆိုပါ Terminal နှင့်လမ်းဆုံကြမ်းပြင်မှာတော့ ...
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆီသို့အဆိုပါမင်္ဂလာဦးခေါင်း၌တွေ့ 21 / 10 / 2014 မှာတွေ့ရှိပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆီသို့မင်္ဂလာဌာနမှူး: ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်မြို့တော်ဝန် Suleyman မင်္ဂလာ, ပတ်ဝန်းကျင်ဆီသို့ဦးတည်ပြုသောအမှုအလုပ်ကျော်ကြည့်ရှုကြ၏။ Sazak Yolu- ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံကြှနျုပျတို့သညျဤလမ်းမိုးသည်းထန်စွာအရွယ်အစားတန်ချိန်ကျွန်းသစ်ကိုဖန်ဆင်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူ "ဟာခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်မြို့တော်ဝန် Suleyman မင်္ဂလာအကြားသစ်တောစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု4ကီလိုမီတာ beltway အလုပ်အရပျကိုဆန်းစစ်, စကျင်ကျောက်, ကျောက်ထိုကဲ့သို့သောဘလော့ဂ်များအဖြစ်ကုန်တင်ကားတင်ဆောင်ဘို့အလွန်ကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ကောင်တီအသွားအလာအခါလမ်းဝန်ဆောင်မှု ကဆက်ပြောသည်စေခြင်းငှါစိုက်ပျိုးရေးဒေသများသစ်သားဒေသများရှိမီးလောင်မှုများပြန့်ပွားကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်ဒေသတွင်းအခြေချနေထိုင်နှင့်တကွ, လက်စွပ်လမ်းပြီးစီးအပေါ်သို့ပြင်းထန်မှု "မင်္ဂလာdedi.başkလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
Besiktas Metro တူးဖော်မှုဧရိယာ
Stone-MAHMUTBEY Metro LINE
Mecidiyeköy3။ လေဆိပ်မက်ထရိုလိုင်း
Topbaş Besiktas မီထရိုဘူတာများတွင်ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
AK ပါတီပြည်နယ်ကိုသမ္မတဓား, Palandökenထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) မှာတွေ့သည်
သမိုင်း Discovery Besiktas Metro တူးဖော်တွေ့ရှိ
ဆောက်လုပ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် Mecidiyekoy-Besiktas Kabatas Metro-အလုပ်သမားသေဆုံးမှု
ဆန်းစစ်ခြင်းသမ္မတKaraosmanoğlu Durmazlar စက်ရုံမှာတွေ့ရှိ
လေ့လာန်ထမ်းများ၏ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard မှာတွေ့ရှိသံမဏိဌာနမှူး,
ဥက္ကဋ္ဌသံမဏိ, Storey Terminal နှင့်လမ်းဆုံ၏လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိ